Gakava paElinburgh Book Fair paVadiki Vakuru Zvazvino Zvinyorwa
Maererano ne Mutemo waSturgeon, 90% yezvinhu marara. Mutemo uyu wakataurwa naTheodoro Sturgeon paakadzivirira sainzi ngano mumaXNUMX.
Mutemo uyu waive yakataurwa pakati pekukakavadzana kuElinburgh International Book Fair pamubvunzo wanga uchitonga hurukuro kwemazuva gumi uye ndizvo zvinotevera: kududzirwa kunoitwa sei mudiki mudiki kana YA. Kunyangwe kuomerera uye kuwanda kweiyi hurukuro, yaive naFrances Hardinge, Marcus Sedgwick naSimon Mayo, hapana munhu anonyatsoziva kuzvitsanangura, kunyangwe vanyori vanonyora aya marudzi emabhuku.
Iyo nharo huru yeYA zvinyorwa neMuvhuro pamutambo uyu yakaratidza nzira isiriyo kune chero gakava rekuti ungatsanangure sei YA zvinyorwa, musoro unogara uchitsauswa pese painowonekwa. Ndechipi Vechidiki Mabhuku Matsva rudzi kana Chikamu? Ndiani anoshandisa rudzi urwu rwemabhuku? Iwe kukura zvakawanda? Yakapereterwa zvisizvo here?
Wechidiki Adult munyori Anthony McGowan akataura zvakambotsanangurwa Mutemo waSturgeon: "90% yeYoung Adut zvinyorwa zvakashata." Munyori akataura kuti akazvidemba nekutaura kune vateereri vechichena vevakadzi vachena kumisangano yeYA. Semhedzisiro, vamwe vakataura kuti ruzhinji rwemaYoung Adult mabloggi vanhukadzi uye kuti vese vaparidzi vemabhuku aya vanhukadzi.
"Iko kune kwakakura huwandu hwesimba kuenda mune aya marudzi enhau., nyaya dzinogona kukwezva vakadzi vane makore ekuma20 ne30 pane vechidiki. "Tine nyika ino inotongwa nevakadzi vanonyora nyaya idzi kuti vamwe vakadzi vadiki vaverenge nekufungisisa nezvazvo."
Mudiki Mukuru anogona kunge asiri mhando, pachokwadi ini handingazvione zvakadaro nekuti chikamu chechikamu icho chinokubatsira iwe kuziva kuti rudzii rwevateereri rwakanangidzirwa. Nekudaro, iyo gakava, ichitevera mutsara uyu, yakadzikira mune dzimwe gakava dzinowanzoitika kutenderera mhando iyi.
McGowan aitaura pane chimwe chinhu icho Elizabeth Wein naPhilip Womack vasina kubvumirana nacho, uye ndiko kuti, maererano nezvaanotaura, haafungi kuti vanhu vakuru vanofanirwa kuverenga vechidiki Bhuku revakuru.
“Ndinofunga unofanira kuenda mberi nekuverenga Tolstoy naDostoevsky kana kuti Dickens wozomira kuverenga Crespúscuo neThe Hunger Games. "Chikamu chekuva munhu mukuru kusiya zvinhu izvi kumashure."
Vanoverengeka veavo vaivapo vakanyunyuta pamusoro pekurambwa kweYoung Adult mabhuku mune vakuru vateereri. Munyori Patrice Lawrence, makore makumi mana nemapfumbamwe, akazivisa kuombera kuti haazopedza nguva achiverenga Dostoevsky naTolstoy nekuda kwekuti haadi kuaverenga. Vamwe vakataura izvozvo gakava rakanga raendeswa zvachose kukanganwa kutsanangura kuti mabhuku eVadiki Adult aive chii.
Vazhinji vanyori veichi chinyorwa vakarumbidza hukuru hwenzvimbo yavo yekuyaruka mune dzimwe nharo, achiwedzera kuti ivo havana kunyora idzi nyaya kunyanya kune vateereri. Munyori Jenny Downham akataura muhurukuro kuti hIni ndaive ndaona bhuku rake, Ndisati Ndafa, mune ese eVechidiki Adult uye evakuru ngano zvikamuEhe, izvo zvaitaridzika kunge benzi kwaari, asi semazano ekushambadzira hazvina kuipa.
Semuverengi wechidiki wevakuru ndinoshamisika kuti sei uchifanira kugara uchiisa mumapoka uye uchifunga kuti munhu mumwe nemumwe anofanira kuverenga zvichienderana nezera rake. Mabhuku ndeevaraidzo uye kana iwe uchivaraidzwa nemabhuku asiri e "zera rako", ini handione chakaipa. Pane rimwe divi Haugone kuverenga marudzi ese emabhuku? Kunze kwekuverenga vechidiki Mudiki ini ndoda kuverenga mamwe marudzi evakuru chikamu mabhuku uye ndinotenda kuti ese mapoka anogona kupa zvakawanda kune ese marudzi evaverengi, zvese zvinoenderana nekuziva nzira yekusarudza rakakodzera bhuku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Gakava paElinburgh Book Fair paVadiki Vakuru
Ndeapi mabhuku mashanu aunogona kuponesa kubva kunjodzi yezvakatipoteredza?